U soo wareejinta ama ka soo dagista garoonka Basel & Zurich | Adeegga guud ee Switzerland
Adeeg Basel Basel, adeeggaaga adeeggaaga ama ka soo duullaya garoomada Basel iyo Zurich. Switzerland ee.
Qiimaha cadaalad ah ee lagama-maarmaanka ah, nala soo xiriir annaga oo aan waajibaad ka ahayn ama si uun u isticmaal foomka xiriirka ee hoos
Dalbo hadda iyo bixinta ka dib raacista.
WEYDIISASHADA / AMAR
(Waxaan ka jawaabi doonaa saacadda 1.)
Miyaad raadineysaa bedelka garoonka diyaaradaha ee Basel ama Zurich? Kadibna waxaan sugeynaa inaan kaa maqalno.
Waxaan isku darsannaa raaxada adeeg tagaasida oo la isku halayn karo oo leh dareen wanaagsan oo ah gaadiidka sharafta leh ee adeeggayaga limousine.
Waxaan ku farxi doonaa inaan ku kaxeyn doonno shandado ku yaala Basel Airport ama meel kale oo ka mid ah Switzerland. Waxaa lagugu soo dhaweynayaa inaad nala soo socodsiiso adigoo la xiriiraya xiriirkaaga shakhsi ahaaneed.
sida Basel City Airport Basel Chf 40.-
Basel iyo qiime jaban ee garoonka diyaaradaha ee Basel iyo Zurich
Garoonka diyaaradaha ee Garoonka Basel wuxuu si dhaqso ah kuugu qabsanayaa diyaaraddaada ama dib ugu soo noqoshada magaalada. Gaar ahaan garoonka diyaaradaha waxaa badanaa wacyigelin badan leh, oo si joogto ah u safraya, waxay ogtahay sida aan loo ogaan karin raadinta meel bannaan oo garoonku ku yaallo garoonka diyaaradaha. Waxaan nahay shirkadaha taksiyada ah oo ku siinaya xalkaaga adeegeena adeegga xawilaadda si raaxo leh oo aan si fudud u maamulin safarka garoonka diyaaradaha.
Gaadiidka tagaasida tagaasida garoonka diyaaradaha ee dibedda
Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale kuu kaxeyneynaa meelo kale oo ku yaal Swiserland iyo meel u dhow Faransiiska iyo Jarmalka. Inkastoo garoonka diyaaradaha Basel uu yahay mid balaadhan, had iyo jeer ma bixinayo isku xirka duulimaadka. Waxaa laga yaabaa in ay habboon tahay in laga bilaabo laga bilaabo maddaarka deriska ah. Waxaan kuu soo kaxeyneynaa madaarka Zurich ama wadamada jaarka ah iyada oo aan wax dhibaato ah, tusaale ahaan garoonka Stuttgart ama xarunta yurub ee Frankfurt am Main.
Nagala soo xiriir safarrada shakhsiyadeed, haddii aad si gaar ah u safreyso iyo fasaxa dalxiiska ee Switzerland, ama u safrida ganacsiga Switzerland.
Waxaad ku nooshahay Basel oo waxaan jeclaan laheyn adeegeena adeegga maraakiibta Garoonka Basel Book? Dhibaato ma ahan, waxaan u qaadnaa dadka 7 ee baska tikitka yaryar isla markaana ay ku jiraan boorsooyinka garoonka Basel, Zurich, Geneva ama dibedda. Waxaan kuu soo kaxeyneynaa si raaxo leh oo markasta madaarkaaga.
Adeegyada rakaabka iyo shirkadaha
Waxaan sidoo kale ilaalineynaa mashruucyada shirkadaha waaweyn, shaqaalahaaga ayaa tusaale ahaan ku jira hoteel Basel oo u baahan in loo guuro magaalo kale, tusaale ahaan Zurich, Ama waa inaad si joogto ah u safartaa oo aad maalin kasta ku safartaa Basel. Waxaannu nahay lamaanahaaga kartida leh ee gaadiidka ee deeq-bixiyeyaasha shirkadda ee Switzerland iyo wareejinta garoonka.
Na soo wac ama naga soo dir SMS oo weydiiso qiimaha joogtada ah ee aan bixino.
Basel-kaaga adeegga isgaadhsiinta.
Faa'iidooyinka Adeegga Beddelka:
Haddii qof 1 ama 7, hadiyo goor qiimo hooseeya
Ku haboon Madaarka Zurich, Basel, Geneva iyo safar dibadda ah
Qiimaha qarsoon, dhammaan qiimayaasha go'an
Lacag dheeraad ah laguma bixinayo kaarka deynta
Lammaane iyo adeeg
Nagala soo xiriir lambarka soo socda:
Telefoon: + 41 78 861 35 50